टेकुमा कोरोना संक्रमित भन्दा इन्फ्लुन्जाका बिरामी बढि – Health Post Nepal
२०७८ भदौ ३१ गते ११:१८
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको गेटबाट अस्पताल परिसर भित्र छिर्दा अघिपछिको भन्दा माहोल केही फरक थियो।
विगत दुई वर्ष देखि कोरोना संक्रमितको उपचारमा अब्बल भूमिका निवार्ह गर्दै आएको अस्पतालमा संक्रमित बिरामीको लर्को भन्दा पनि भाइरस इन्फेक्सन सेवा लिन आउने बिरामीको भीड लागेको थियो।
एक तर्फ चिकित्सक, बीचमा टेबल अनि अर्को तर्फ बिरामी। दिउँसो समयमा बिरामी आउने जाँच गराउने र जाने क्रम चलिरहेको नै थियो।
तर, केहीसमय अगाडी आकस्मिक कक्षमा भीडभाड हुने दृश्य आजभोली फेरिएको छ।
केही समय अघि आकस्मिक कक्ष बाहिर भूईंमा समेत राखेर उपचार गराइरहेको ठाउँ अहिले सुनसान छ। छन् त केवल सुरक्षा गार्ड र भर्ना भएर बसेका बिरामीका कुरुवा।
केही सातादेखि कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा छ। देशकै ठूलो सरुवारोग अस्पतालमै पनि संक्रमितको संख्या निकै घटेको छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा दैनिक २० देखि २५ जना बिरामी भर्ना हुने गरेको थिए। तर, त्यो संख्या अहिले ह्वातै घटेको छ।
अस्पतालका प्रशासन प्रमुख नवराज गौतमका अनुसार हाल अस्पतालमा औसतमा ३ देखि ४ जना कोरोना संक्रमित भर्ना हुने गरेका छन्। हेल्थपोष्टको टीम अस्पतालमा पुग्दा आकस्मिक कक्षमा मात्र चार जना संक्रमित मात्र उपचाररत थिए भने एकजना स्क्रब टाइफसका बिरामीलाई अलग्गै कक्षमा राखिएको थियो।
अस्पतालको रेर्कड अनुसार हाल एचडियुमा ३९, आईसियुमा ८ जना र भेन्टिलेटरमा ६ जना बिरामी उपचार गराइरहेका छन्। हाल अस्पतालभर नै कोरोनाको उपचार लिन आउने बिरामीको संख्या घट्दै गएको आइसोलेसनका वार्डका प्रमुख कमला पौडेल बताउछिन्।
‘अहिले भाइरस निकै कमजोर भएको वा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर एन्टिबडि विकास भएकै कारण कम मानिसहरु भर्ना भएका हुन सक्छन्। पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै अक्सिजन चाहिने बिरामी पनि कम भएको छ,’ उनले भनिन्।
हाल १५ लिटर भन्दा बढि अक्सिजन चाहिने बिरामी भर्ना नभएको पौडेल बताउँछिन्। अस्पतालमा १० लिटर अक्सिजन चाहिने बिरामी जम्मा दुई जना छन् भने २ देखि ५ लिटर २०–२२ जनाको हाराहारीमा छन्।
अस्पतालको तथ्यांक हेर्दा कोरोना संक्रमितको भन्दा इन्फ्लुन्जा भाइरसका बिरामी उपचारका लागि आउने संख्या धेरै पाइएको छ। अन्य बिरामीको लागि अस्पतालले नेशनल इन्फ्लुन्जा सर्भिलियन्स नेटवर्कको डेस्क नै राखेको छ।
उक्त ओपिडी डेस्कमा इन्फ्लुन्जाको लागि एक सयभन्दा बढी सेवा लिन आउँछन्। जसमध्ये पाँच–छ जनाको संक्रमित पुष्टि हुने गरेको छ। कोरोनाका तुलना यस मौसममा इन्फ्लुन्जाका बिरामी ह्वातै बढेको चिकित्सक बताउँछन्।
सरकारले कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गरेपछि टेकुका अन्य सेवा भने प्रभावित भएका छन्।
‘पहिलो हाम्रो अस्पताल इन्फ्लुन्जा तथा स्क्रबटाइफसका बिरामीले भरिभराउ हुन्थ्यो। यो समयमा यस्ता विरामीहरु निकै बढ्छन्,’ तर हामीले भर्ना नलिएकै कारण उनीहरु अन्य अस्पताल जान वाध्य छन्,’ पौडेलले भनिन्।
अस्पतालका कन्सल्टेन्ट डा. सिभेन्द्र झाका अनुसार हाल ज्वरो रुघाखोकी जस्ता लक्षण देखिएका बिरामीले कोरोनाको आशंका गर्दा अधिंकासमा नेगेटिभ नै देखिने गरेको छ।
झण्डै एक महिनादेखि भाइरल इन्फ्लुन्जाका बिरामी ह्वातै बढ्न थालेका छन्। डा. सिभेन्द्र झाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका हरेक परिवारमा दुई देखि चार जना इन्फ्लुन्जाका बिरामी भेटिने गरेका छन्।
‘कोरोना संक्रमण हुन अलि लामो समयसम्म बिरामीको कन्ट्याक्टमा रहनुपर्छ भने इन्फ्लुन्जा संक्रमण भने केही समयमै सर्न सक्दछ,’ उनले भने। अस्पतालमा धेरै संख्यामा कोरोना परीक्षणका लागि आउने गर्दछन्। तर, कोरोना संक्रमण र इन्फ्लुन्जाको लक्षण मिल्दो जुल्दो भएका कारण बिरामीले इन्फ्लुन्जा भएको कल्पना पनि नगरेको डा. झाले बताए।
‘हामीले कतिपय बिरामीलाई इन्फ्लुन्जा होकी भनेर जाँच गर्न लगाएकै कारण दैनिक ५ जना विरामी देखिने गरेका छन् तर यो भन्दा पनि बढि बिरामी हुन सक्छन्। धेरैले परीक्षण पनि गराएका छैनन्,’ डा. झाले भने।
इन्फ्लुन्जा हुँदा वृद्दलाई सास फेर्न गाहे हुने, माथि देखि तल टाउको दुख्ने, आखाँ रातो हुने, नाकबाट पानी बग्ने, घाँटी दुख्ने, थुक निल्न गाहे हुने, थकाई लाग्ने, चल्न मन नलाग्ने जस्ता लक्षणहरु देखिने गरेको छ।
डा. झा ज्वरो, रुघाखोकी लागेका व्यक्तिलाई अनावश्यक रुपमा एन्टिबायोटिक नखान आग्रह गर्छन्।
‘यो रोग भाइरसका कारण हुने हो। एन्टिबायोटिक खाएर निको हुँदैन। यो भाइरसले चारपाँच दिन दुख दिन्छ र आफै निको भएर जान्छ। यसलाई अन्य कुनै उपचार गरिरहन पर्दैन,’ उनले भने।